Agaasimaha Warbaahinta Horseed Media oo Xorriyadiisa dib u helay(Sawiro+Cod) • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Agaasimaha Warbaahinta Horseed Media oo Xorriyadiisa dib u helay(Sawiro+Cod)
Agaasimaha Warbaahinta Horseed Media oo Xorriyadiisa dib u helay(Sawiro+Cod)
Posted: Abdirahman. A - November 8, 2010
Waxaa saaka Xorriyadiisa dib u helay Agaasimaha Warbaahinta Horseed Media Eng.Cabdifataax Jaamac Mire oo mudo ku dhow saddex bilood xabsiga weyn ee magaalada Bosaaso ku xirnaa.
Suxufiyin,ganacsato,Ehelada weriyaha iyo dad kala duwan ayaa saaka isu tegay banaanka weyn ee xabsiga magaalada Bosaaso halkaas oo ay ku sugayeen Agaasimaha Horseed Media oo shalay Madaxweynaha Dawladda Puntland ku dhawaaqay inuu cafis u fidiyey.
Cabdifataax Jaamac Mire ayaa markii lasoo daayey salaan iyo marxabayn la maray dhamaan dadkii ku sugaayay xabsiga Bosaaso,waxaana wejigiisa ka muuqday farxad badan.
Agaasimaha Horseed Media oo shir jira’id oo kooban u qabtay Saxaafada ayaa sheegay inuu ku faraxsanyahay inuu hanto xorriyadiisa,waxaana uu u mahadceliyey dhamaan dadkii ka qayb qaatay sii deyntiisa isagoo sidoo kale u mahadceliyey Madaxweynaha Puntland.
Maqal Waraysiga kooban ee uu baxshey Cabdifataax Jaamac Mire [powerpress]
Sidoo kale wuxuu isla maanta dib ula midoobay qoyskiisa iyo caruurtiisa oo iyaguna si aad ah usoo dhoweyeen xorriyadiisa.
Dhamaan bahda Saxaafada Soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey sii deynta Agaasimaha Horseed Media oo 14-kii bishii August maxkamada darajada kowaad ee gobolka Bari ku xukuntay 6-sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed $500-doolarka maraykanka.